EYONA VPN YEPC YEWINDOWS UKONYUKA KOKHUSELEKO KUNYE NOBUCALA (UHLAZIYWA NGO-2022) - ITHAMBILE
Eyona VPN yeWindows PC ukuFaka uKhuseleko kunye noBucala (uHlaziywa ngo-2022)
Kwabo bafuna indlela yokwandisa ubumfihlo babo kunye nokhuseleko ngelixa bekhangela i-intanethi kufuneka basebenzise i VPN . Ukumela Uthungelwano lwaBucala olubonakalayo , i-VPN sisixhobo esinokusetyenziswa ngabantu ukufihla ubuni babo kunye nokufihla indawo yabo xa usebenzisa i-intanethi. I-VPN isebenza ngokusebenzisa iiseva ezahlukeneyo kunye nokubethela yonke idatha yekhompyuter ukusuka ekupheleni ukuya ekupheleni. Kwangaxeshanye, abantu kufuneka baqinisekise ukuba basebenzisa iVPN eyenzelwe iikhompyuter zabo. Kulapho olu luhlu lunokunceda khona. Jonga ezinye zeeVPN eziphezulu ezingezantsi kwaye uqinisekise ukuba yonke idatha ikhuselwe ngelixa ukhangela i-intanethi.
Enye yeeVPN eziphambili emhlabeni, Express VPN ivumela wonke umntu ukuba asebenzise i-intanethi ngokulula. Ngezantya eziphakamileyo ezisakhusela idatha yabantu njengoko bekhangela i-intanethi, i-Express VPN isebenza kakuhle kwi-Mac kunye neWindows (PC) izixhobo. Ngaphaya koko, abasebenzisi basakwazi ukusebenzisa iinethiwekhi zikawonke-wonke kunye nezabucala ngaxeshanye, nto leyo ilungile kwabo benza izinto ezininzi.
Ezinye zezibonelelo zokusebenzisa i-Express VPN ziquka:
Akukho mithetho yokugcina idatha.
Izantya eziphezulu zinikezelwa kwi-Express VPN.
I-Express VPN ibonelela ngokufikelela kwiNetflix, ivumela abantu ukuba bajikeleze imida ye-geo.
I-Express VPN inemilinganiselo yosetyenziso olukhethekileyo.
Ukuya kuthi ga kwisihlanu abantu banokusebenzisa i-Express VPN ngaxeshanye.
Kulula ukubona ukuba kutheni i-Express VPN ithandwa kakhulu.
Nabani na okhangela iVPN ekhethekileyo kufuneka athathele ingqalelo Surfshark VPN . ISurfshark VPN yenzelwe ukunceda abantu bakhusele ulwazi lwabo kwaye bafihle izazisi zabo xa besebenzisa i-intanethi. Ngokufikelela esiphelweni ukuya esiphelweni, wonke umntu unokuphumla ngokulula, esazi ukuba ulwazi kunye nendawo ahlala kuyo zikhuselwe ngomgangatho ongalinganiyo kunye noguqulelo oluntsonkothileyo. ISurfshark VPN yeWindows iya kubonelela wonke umntu ngamava okukhangela aphezulu.
Ezinye zezibonelelo eziza neSurfshark VPN yeWindows, enokufumaneka https://surfshark.com/download/windows , ziquka:
ISurfshark VPN ibonelela ngezantya ezikhethekileyo ze-intanethi.
I-interface ilula ngendlela emangalisayo ukuhamba kwaye kulula ukuyisebenzisa, nakwabo batsha kwiiVPNs.
Kuyenzeka ukuba usebenzise iSurfshark VPN ukufikelela kwiinkonzo zokusasaza ezinokuthi zitshixeke nge-geo
ISurfshark iya kukhusela ubumfihlo bomntu wonke.
Le VPN isekwe kwiZiqithi zaseVirgin, ezingaphandle kwazo naziphi na izivumelwano zokucupha.
Inenye yeendleko eziphantsi kwimarike namhlanje.
Kukho inani elingenamkhawulo wezixhobo zobhaliso ngalunye.
Kukho isilingo sasimahla seentsuku ezingama-30 esinokusetyenziswa ngumntu wonke phambi kokuba athenge inkonzo epheleleyo.
Ezi zezinye zezibonelelo eziphezulu zokusebenzisa iSurfshark VPN.
Enye iVPN ekufuneka wonke umntu ayiqwalasele ibizwa NordVPN . I-Nord VPN inabathengi abangaphezu kwezigidi ezisi-8 kwihlabathi liphela, nto leyo eyenza ukuba ibe yenye yezona zidumileyo zeVPNs namhlanje. Lilonke, iNord VPN inokusetyenziselwa ukubukela iNetflix kunye neemovie zesifula ngaphandle kokucotha kangako. Ngaphaya koko, i-Nord VPN isekwe ePanama, okuthetha ukuba inkampani ayinakuze inyanzeliswe ukuba inikezele naluphi na ulwazi olunayo kubasebenzisi bayo. Ngenxa yoko, le yenye yezona VPNs zikhuselekileyo phaya.
Ezinye zezona zibonelelo zinkulu zeNord VPN ziquka:
Kukho utshintsho lokubulala abantu abanokusebenzisa ukubulala inkonzo ye-VPN ngokukhawuleza.
I-Nord VPN inokusetyenziselwa ukujikeleza izithintelo zejografi kwiNetflix kunye nezinye iinkonzo zokusasaza.
Kukho umgaqo-nkqubo ongqongqo wokugawulwa kwemithi kunye ne-Nord VPN.
I-Nord VPN inemilinganiselo ekhethekileyo kwivenkile ye-app, oko kuthetha ukuba ilungile kwiWindows.
Ezi zimbalwa zeenzuzo ezininzi eziza neNord VPN.
Ukufikelela kwi-Intanethi yabucala
Ngegama elihle, uFikelelo lwe-Intanethi lwaBucala lufanelekile kwiiPC. Inkampani ayizange icelwe ukuba yenze guqula idatha yayo , kwaye babanga ukuba abayifaki idatha yabo konke konke. Ngokusekwe eDenver, inkampani inenkonzo enkulu yabathengi kwaye ifumaneka lula xa kukho umntu ofuna uncedo. Kananjalo banoguqulelo oluntsonkothileyo.
Ezinye zezibonelelo eziphezulu zokuFikelela kwi-Intanethi yaBucala ziquka:
I-VPN ivutha ngokukhawuleza kwiiPC.
Ukufikelela kwi-Intanethi yabucala kujikeleza iibhloko zeNetflix.
Kukho umgaqo-nkqubo ongqongqo wokugawulwa kwemithi olandelwa kuFikelelo lwe-Intanethi yaBucala Fumana iVPN ephezulu kwiMarike namhlanje.
Ezi zimbalwa nje ze iiVPN eziphezulu abantu abanokusebenzisa ukuba bafuna ukonyusa ubumfihlo babo kunye nokhuseleko ngelixa bebrawuza kwi-intanethi. Ngamandla e-intanethi namhlanje, kulula ukuba abantu bafikelele kulwazi kwaye banxibelelane nabani na nangaliphi na ixesha. Kwangaxeshanye, oku kukwabangela ukuba abantu bakhusele ubumfihlo babo kunye nokhuseleko. Sebenzisa amandla ezi VPN kwaye uqinisekise ukuba yonke idatha ikhuselwe ngelixa ubrawuza.
Ngaba i-VPN ivala i-Intanethi Windows 10? Apha 7 izisombululo isicelo
Vula ukhangelo lwaBucala (imowudi ye-incognito) nakusiphi na isikhangeli sewebhu
Useta njani kwaye uqwalasele uQhagamshelwano lweVPN Windows 10/ 8/7?
Isonjululwe: Impazamo ye-VPN 691 Windows 10, 8.1 kunye ne-7